IAmazon inika iinkcukacha zendlela ekuceba ukusasaza ngayo ukuthenga kwakho ngeedrones | Iindaba zeGajethi
UJeff Bezos ukwimeko entsha yokuyila izinto ezintsha kangangeminyaka eliqela ngoku ebesingenakucinga ngayo, umakhulu wentengiso kwi-Intanethi Isimangalisile kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ngokuthengwa kokutya okupheleleyo, umxokelelwano onamandla weevenkile ezinkulu zeemveliso zemifuno zaseNyakatho Melika, apho yayiya kuba yeyokuqala kwimarike yazo yemveli. Nangona kunjalo, sele siyazi ukuba iAmazon ihlala inika ikalika enye enye isanti.
Ngeli thuba, emva kokuthengwa kwe-Whole Foods, Inkampani kaJeff Bezos ifune ukusinika iinkcukacha ezithe kratya malunga nendlela yokuhambisa iipasile ngeedrones. Ukutsha okucacileyo okungabonakali kufutshane kakhulu ekufikeni, kodwa oko kuya kusiba ngakumbi nangakumbi.
Kucacile ukuba olu luvo alunangqondo ngokupheleleyo, kodwa ayisiyonto esinokucinga ukuba iza kufika kwixesha elifutshane, zininzi izinto ezinokuba nefuthe lokuba ingaba olu luvo luyasebenza na okanye alusebenzi. Kwelinye icala, indlela echazwe ngayo kule mizobo yenkqubo icacile kwaye isombulula ezinye zeengxaki ezinkulu esinokucinga ngazo. Ngaphandle kwamathandabuzo, isebe le-R & D laseAmazon lelinye lawona anamandla emhlabeni, kwaye ngekhe iyeke ukusothusa.
Umbono iya kuba kukuvelisa into efana nohlobo lwesitishi sokugcina umxholo kwaye uphume ngeedrones kwizityalo. Ezi "silos" ziya kubekwa ngaphandle kwedolophu, zinendawo eyaneleyo, kwaye ziya kuhamba nentengiso ngqo kwikhaya lomthengi. Ukushiya imveliso baya kusebenzisa amaqonga okanye iibhalkhoni, ke kufuneka siyiyeke ipaki yedrone siyithathe.
Into edala ukuthandabuza kakhulu kukuba baya kuqinisekisa ngokhuseleko kungekuphela nje yabahambi ngeenyawo, kodwa kunye needrones ngokwazo, eziya kuthi ngokuqinisekileyo zibe ziithagethi zamasela nabaphuli-mthetho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » IAmazon inika iinkcukacha zendlela ekufuna ukusasaza ngayo ukuthenga kwakho ngeedrones